काठमाडौ । हिन्दू धर्मालम्बीका लागि अति पवित्र व्रत सावित्री व्रत ज्येष्ठ महिनाको अमावस्यामा मनाइन्छ। यस दिन, विवाहित महिलाहरूले बर, पिपलको रूखको पूजा गर्दछन् र आफ्ना पतिको लामो जीवनको लागि प्रार्थना गर्दछन्।
सावित्री व्रत राम्रो भाग्य प्राप्त गर्न को लागि एक ठूलो छिटो आरधाना गर्ने विशेष दिन मानिन्छ। हिन्दू क्यालेन्डरका अनुसार यस वर्ष भट सावित्री भ्राट बिहीबार, जुन १० अर्थात २७ गते मनाइनेछ।
बरगद 9वटवृक्ष) को रूखको महत्त्व के हो ?
हिन्दू धर्मशास्त्रका अनुसार वटवृक्षमा ब्रह्मा रूखको जरामा, मध्यमा विष्णु र अग्रभूमिमा शिव रहेको विश्वास गर्दछ। वटवृक्षको रूखलाई भगवान रूख मानिन्छ । देवी सावित्री पनि यस रूखमा बस्छिन् ।
विश्वास अनुसार सावित्रीले आफ्नो पतिलाई वटवृक्षको रूखमुनि ब्यूँताइन्। त्यस पछि यो उपवासलाई भट सावित्री भनेर चिनिन्छ। यस दिन विवाहित महिलाहरूले अखण्ड सौभाग्य प्राप्त गर्न बरको रुख अर्थात वटवृक्षको रूखको पूजा गर्दछन्।
रूखलाई परिक्रमा गर्दा, कच्चा कपास यसको वरिपरि १० पटक बेरिन्छ । महिलाहरूले सावित्री सत्यवानको कथा सुन्दछन्। सावित्रीको कथा सुनेपछि सबै चाहनाहरू पूरा हुन्छन् र पतिको समस्याहरू पनि हट्दछन्।
सावित्री व्रतको कहानी
पौराणिक कथा अनुसार सावित्री मद्रासमा अश्वपति नामक राजाकी छोरी थिइन। जब सावित्रीलाई दुलहा खोज्न भनियो, उनले डिम्टसेनको छोरा सत्यवानको नाम उल्लेख गरे।
जब नारद जीलाई यो कुरा थाहा भयो, तब उनले राजा अश्वपतिलाई भने कि सत्यवान अल्पकालिन छ र एक वर्ष पछि मर्नेछ। यो कुरा थाहा पाएपछिपनि सावित्री विवाहको लागि अडिग भइन्।
सावित्रीको सत्यवानसँग विवाह पछि सावित्री सासु र श्रीमानको सेवामा व्यस्त भइन्। नारद जीले आफ्नो मृत्युको बारेमा बताएको दिनमा सावित्री सत्यवानसँग जंगलमा गइन्।
सत्यवानले जंगलमा रूख चढ्न थालेपछि उनको टाउकोमा असह्य पीडा हुन थाल्यो। ऊ सावित्रीको काखमा टाउको राख्यो। केही समय पछि सावित्रीले देखिन् की यमराजले त्यहाँ धेरै सन्देशवाहकहरू लिएर आइपुगेका थिए । तिनीहरू सत्यवानको शरीर लिएर दक्षिण दिशातिर लागे।
तरपनि उनीहरुको पछिलाग्न सावित्री पछि परिनन् । सावित्रीलाई पछाडि आउँदै गरेको देखेर यमराजले भने, हे देवी । जहाँसम्म मानिस समर्थन गर्न सक्छ, तपाईंले आफ्नो पतिलाई त्यहाँसम्म समर्थन गर्नुभयो।
अब त्यो सम्भव छैन । अब तपाईं पछाडि जानुहोस्। सावित्रीले भनिन् म मेरो श्रीमानसँगै जान्छु । यो मेरो श्रीमतीको धर्म हो। यमराजले सावित्रीको रोचक आवाज सुनेपछि उनलाई वरदान माग भने सावित्रीले भनिन् मेरा ससुरा अन्धा छन् उनलाई नेत्र प्रकाश दिनुहोस्।
यमराजले उनलाई तथास्तु भन्दै फर्कने आग्रह गरे, तर सावित्रीले पनि यमराजलाई पछ्याउन छोडिदिए। यमराजले फेरि सावित्रिलाई सोध तपाई के चाहानुहुन्छ देवी । सावित्रीले मेरो ससुरालको हराएको राज्य उसलाई फिर्ता गरिनु पर्छ भनिन् ।
यमराजले उनलाई तथास्तु भन्दै फर्कन आग्रह गरे । तर सावित्री राजी भएनन् । सावित्रीको पतिको भक्ति र वफादारी देखेर यमराज पग्लिए। उसले अर्को वरदानका लागि फेरी आग्रह गरे । सावित्रीले म सत्यवान छोराहरूको आमा बन्न चाहन्छु। कृपया मलाई यो वरदान दिनुहोस्।
सावित्रीको भक्तिबाट प्रसन्न भएर यमराजले सत्यवानलाई लुपबाट मुक्त गरे र अदृश्य भए । सावित्री अब उही बटबृक्षको रूखमा पुगेकी थिइन। बरको रूखमुनि सत्यवानको मृत भइसकेको थियो । तर यमराजले छोडेर हराएपछि उनी त उठेर बसे । सत्यवानका आमाबुबाको आँखा निको भयो र उनीहरूले हराएको राज्य फिर्ता पाए। सबै कुरा पत्नीको धर्मबाट फर्कियो । त्यही स्मरण गर्दै सावित्री ब्रत गर्ने गरिन्छ ।
कसरी कोरोना महामारीमा पूजा गर्ने ?
कोरोना अवधिको कारण यदि तपाई बरको रूखको पूजा गर्न जान सक्नुहुन्न भने, तपाई आफ्नो घरमा त्रिदेव अर्थात् ब्रह्मा, विष्णु र महेशको पूजा गर्न सक्नुहुन्छ।
यस बाहेक बरको रूखको एउटा हाँगा भाँडामा हाल्नुहोस् र यसलाई विधिवत पूजा गर्नुहोस्। पूजा, पानी, मोली, रोली, कच्चा कपास, भिजेको चना, फूल र धूप प्रयोग गर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिले रूखको पूजा गर्नुहोस्।
त्यसपछि सावित्री सत्यवानको कथा सुन्नुहोस् र अरुलाई पनि वर्णन गर्नुहोस्। अब फेरि भिजेको चना, केही पैसा र आफ्नो सासुलाई लुगा दिएर आशीर्वाद लिनुहोस्। पूजा गरिसकेपछि एउटी गरिब विवाहित महिलालाई महका चीजहरू दान गर्नुहोस्। यस बाहेक कपडा र फलहरू पनि ब्राह्मणलाई दान गर्न सकिन्छ।